“Waxaan waayay aabahay oo aan jeclaa, Mareykana waan ka niyad jabay” |
“Waxaan waayay aabahay oo aan jeclaa, Mareykana waan ka niyad jabay”
Markii aabaheed oo 66 sanno jir ah uu u geeriyooday fayraska corona Angelina Proia ayaa waxay noqotay qof camoole ah, waxayna dareentay in dowladdeeda iyo muwaadiniinta dalkeedaba ay dayeeceen.
“Waxaan dareemay in dalkayga iyo dadkayguba ay dhabarka ii jeediyeen.” Waxay ilatahay inaan dareemayo xaalad murugu leh iyo in la i dayacay.”
“Bilihii ugu horreeyay geerida aabahay ka dib waxaan isku dayay inaan caadi iska dhigo balse markii ay bilowdeen maalmaha fasaxa xaqiiqdii xaaladda way igu adkaatay oo imisaa xusuus ah ayaa meesha ka baxaysa,” ayay tiri
Waxaa jira dad badan oo sida Angelina Proia ah oo eheladoodii ku waayay gaar ahaan waalidiintooda. Xanuunka fayraska corona ayaa waxa uu dunida u horseeday dhibaato ay adagatay in laga soo waaqsado.
Tan iyo intii uu bilowday xanuunkan dunida halakeeyay, caruur badan ayaa agoontoobay halka qaarkodna ay isku darsadeen agoon iyo rajanimo.
Angelina oo illinta ceshan weysay markii ay ka sheekeyneysay xanuunka ay mareyso ayaa sheegtay in abaheed uu xanuunka soo ridday bishii Abriil oo ahayd xilligii mowjadda koobaad ee fayraska.
“Isbitaalka ayay geeyeen ka dibna waxay ku xireen qalabka neefshada, markaas ka dib ayay ku sameeyeen baaritaanka fayraska corona, waana laga helay.”
“Hase yeeshee, nasiib darro kama uusan kicin oo 10 maalmood ka dibba wuu geeriyooday,” ayay tiri.
66 sanno jirkan ayaa waxaa uu ahaa orodyan, horayna uma uusan lahayn xanuuno kale.
“Waxa uu jeclaa inuu markaste sameeyo, waxyaabaha madadaalada, waxa uu haa 66 jir leh jirka canug 8 jir ah oo kale oo sida uu nolosha u wajayana waxay ahayd si caadi ah oo xaaladdiisa way wanaagsanayd.”
Waxay sheegtay in fasaxaan kii horreeyay ay si qurux badan u wada qaateen laakin haatan ay wajahayso kelinimo sababtoo ah waxay tiri waxaan keliya marayaa gobohii aan si wadajir ah ugu damaashaadi jirnay.
“Waxaan dareemayaa in dalkeena na dayacay, waxaana sidoo kale qalbigeyga ii sheegay inaan waayin aabahay oo keliya oo waxaa lumiyay dareenkaygi badqabka.”
“Waxaan rabaa in dadka ay si dhab ah u qaataan oo uga fakaraan xaaladda fayraska corona, si illinta iyo kelinamada ay aan dareemayo aysan ugu dhicin dad badan oo kale.” ayay tiri Angelina Proia.